Sida loo labisto Dubai | Wararka Safarka
Mariela Carril | 09/09/2021 17:00 | La cusbooneysiiyay 09/09/2021 18:14 | Talooyin, Imaaraadka Carabta
ka Imaaraadka Carabta Waa koox imaarado ah waxaana ka mid ah Dubai. Muddo hadda, waxay caan ku noqotay dhismayaasha ka hor imanaya mala -awaalka iyo lahaanshaha mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ugu waaweyn uguna cajiibka badan adduunka, sidoo kale waxay heshay dalxiis aad u badan.
Laakiin Dubai waa a dalka muslimkaSida dalxiiska iyo caalamkaba sida ay noqotay, sidaas darteed waxaa jira siyaabo gaar ah oo lebbis oo ay tahay in qofku xushmeeyo. Maanta waan la kulmi doonnaa, markaa maqaalku wuxuu ku saabsan yahay sida loo labisto Dubai.
2 Sida loo labisto Dubai
Sidaan sheegay imaaraadka oo caasimaddiisu tahay magaalada isku magaca ah waa xeebta Gacanka Faaris ee caanka ah oo hodanka ah. Laanta baddu way dhex -martaa oo magaalada ayay ka tallaabtaa. U dhawaanshahan badda ayaa horseeday dadka deggan dhulkaas inay naftooda u huraan beerista iyo ka ganacsiga luulka waqtiyo kale. Sababtoo ah meesha ay ku taal, xitaa waqti dheer ka hor intaan la helin saliidda, waxay ahayd dhul la rabay sidaas waxay garanaysay sida loogu jiro gacanta Ingiriiska muddo 200 sano ah.
Fue sanadihii 60 -naadkii markii imaaraadku ogaadeen goobaha shidaalka ee hodanka ah toban sano ka dibna wuxuu ku biiray kuwa kale si uu u qaabeeyo Imaaraadka Carabta. Waa sidee dawladdaada hadda jirta? Waa a boqortooyada dastuuriga ah. Ma laha dad badan oo deggan iyo maanta tirada ugu badan ee dadkeedu waa ajnabi, dadka halkaas ugu nool ganacsi ama muhaajiriin ka shaqeeya dhinaca dhismaha iyo adeegyada kale.
Dubai ma laha shidaal aad u badan sida deriskeeda, markaa haa ama haa waxay ka fikiraysaa inay kala duwnaato dhaqaalaheeda dhaqaale, sidaa darteed waxay wax badan gelisay horumarinta dalxiiska.
Waxaan ku laabannaa bilowgii: waa imaarad Muslim ah sidaas kuwa ay ka sii dhib badan tahay waa dumarka reer galbeedka caadaystay xirashada dhar raaxo leh oo khafiif ah cimilada ugu kulul.
Waxaa kale oo run ah in laba dal oo muslim ahi aanay isku mid ahayn oo mararka qaarkood mid ama ka kale xeerarku ka sii dabacsan yihiin, gaar ahaan kuwa ajnebiga ah. Mabda 'ahaan, ilaa aad ka aragto sida xeerku yahay, waxaa lagugula talinayaa inaad u diyaargarowdid inaad daboosho gacmahaaga iyo lugahaaga iyo madaxaaga, meelaha qaarkood. Yacni, xiro gacmo dhaadheer, surwaal dheer iyo maro -gacmeed ballaaran oo had iyo jeer gacanta ku jira.
Hadda, magaalada Dubai waa magaalo casri ah oo aan sidaas u xirnayn xagga dharka, ka dib waxaa jira ajaanib badan. Sidaa darteed, waxaad arki doontaa dhammaan noocyada dharka, laga bilaabo gaaban ilaa indhashareer buuxa. Markaas, huteelada, maqaayadaha iyo xarumaha wax laga iibsado, meelaha ay suurtogal tahay in lala kulmo dadka deegaanka iyo kuwa ajnabiga ah, waxaa habboon in lala tashado ixtiraam oo dabool lugaha iyo garbaha.
Haddii aadan damacsanayn inaad raacdo oraahdii hore "Meeshaad tagto samee waxaad aragto" Waa meelaha aad dhibka ugu yar ku yeelan doonto. Gaar ahaan haddii aad safar ku aaddo meel ka baxsan Ramadaan. Haddii aad go'aansato inaad u baxdo casho meel aad u qurux badan, markaa waa inaad xirataa dharka duruuftaas.
Iyo xeebta? Markaas dharka xeebta waxaa lagu xiraa xeebta oo keliya. Halkan kuma samayn kartid waxa uu qofku inta badan ku sameeyo meelaha xeebaha ah, oo ah xidhashada suudka maydhashada maalinta oo dhan ama in aad maalintii oo dhan ku jirtid flip-flops. Hadda xeebta waxaad xiran kartaa dabaasha hal-gabal, bikini... xeebta iyo barkadaha dabbaasha iyo barkadaha biyaha labadaba. Sida iska cad, qaawanaan iyo tolid toona ma laha.
Laakiin meelahaas ka baxsan, taas oo ah, haddii aad u lugaynayso degmada ugu da'da weyn Dubai, haddii aad booqato suuqyada dhaqanka ama masaajidka markaa waa inaad taxaddar samaysaa. Waana isla markiiba inaadan dareemi doonin adduunkaaga laakiin dibadda. Dadka maxalliga ah iyo caadooyinkooda ayaa dhowaan kugu soo wareegi doona markaa waa inaad ixtiraamtaa. Haddii aad rabto inaad ka fogaato jaleecyada ama faallooyinka, kuwaas oo hubaal ah inaadan fahmin laakiin iyaguna sidaas oo kale yeeli doonaan, si fiican u taxaddar.
Xaaladda socda booqashada masaajidka, qaarkood waxay oggolaadaan booqashooyinka dadka aan muslimka ahayn, rag iyo dumarba waa inay tagaan iyagoo lugaha iyo gacmaha daboolan. Qaarkood xitaa waxay haystaan ​​dhar dheeri ah, haddii ay dhacdo inaadan sidaas uga soo bixin hoteelka.
Hadda meel kale oo caan ku ah Dubai waa lamadegaanka. Waxaa jira dalxiisyo badan oo lamadegaanka ah waxaana kuu fiican inaad qaar samayso maxaa yeelay way weyn yihiin. Xaaladdan mar walba waxaa habboon in la xidho surwaal, gaagaaban ama surwaal capri (sidoo kale kuwa aad kala goyn kartid lugta badhkeed), iyo muruqa, shaati ama shaar. Iyo dabcan, muraayadda qorraxda iyo koofiyadda.
Maalintii lamadegaanku aad buu u kulul yahay oo xirashada dhar aad kuu daboolaya ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ma gubto gubasho. Waxaa laga yaabaa inay qabow tahay, waxay kuxirantahay waqtiga sanadka, xitaa waxay noqon kartaa inaad habeenkii aado, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad keento kabaha dhow.
Haddii haweenku aysan muujin karin xabadka, gacmaha iyo bawdada, raguna kuma socon karaan feeraha qaawan, ama gaagaaban oo aad u gaaban ama dabaasha oo mid uun iska dhigaysa. Ma jiraan surwaal -gaaban, gaagaaban oo gaagaaban, dushooda, daah -furnaan, ma muuqato nigis. Iyo wax walba oo ka sarreeya, ha xanaaqin haddii ay soo jiitaan dareenkayaga.
Waa maxay faa'idada ku jirta in laga doodo xeerka labiska ama akhlaaqda dhaqanka oo aan ahayn midkayaga? Waxba ka bedeli mayno oo waannu maraynaa, markaa haddii si qalad ah aannu qof u xumaynno oo ay soo jiitaan dareenkayaga, waa inaan raalli gelin ka bixinnaa. Qofna ma rabo in uu boliiska ku lug yeesho, marka waa ku filan tahay in la yeesho xitaa dabeecad sax ah.
Markaa, soo koobid qodobbada ugu badan ee sida loo labisto Dubai: Goobaha dadweynaha ee ugu caansan, haweenku qasab ma aha inay madaxa daboolaan, haa masaajidda, waa inay garbaha daboolaan ugu yaraan jilbaha, malaha jaakadaha, funaanadaha waa inay leeyihiin gacmo gaagaaban, haa waad xiran kartaa bikini, jiinis , inkastoo wax aad u muujinaya. Haa habeenkii, laakiin had iyo jeer jaakad gacanta ku haysa si aad u daboosho waxaan soo bandhigno. Meelo dhaqameedyo badan hadba sida aan u daboolno inta ka badan, ayaa ka sii fiican, isku mid haddii aan tagno dhisme dowladeed.
Nimankuna? Way fududahay, laakiin weli waa mudan tahay in la ogaado dhowr waxyaalood: waxay ku socon karaan gaagaaban oo aan aad u gaabin, inkasta oo aysan caadi ahayn, iyo haa waa inay caajis yihiin, ma jiro baaskiil wadid, dharka cayaaraha haddaad isboortiga samayso, haddii kale sax ma aha, haddii aad masaajid aado waa inaad xidhataa surwaal dheer ...
Ma wax baa dhacaya haddii aanan ixtiraamin qaar ka mid ah kuwan? Waad ka tegi kartaa helitaanka qaar faallo adag, maraya a eeg xun ilaa ay tahay inaad wax ka qabato boolis iyo xabsi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Talooyin » Sida loo labisto Dubai